Teny fampidiranana« Prologue » na « Introduction » Archives - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Catégorie : Teny fampidiranana« Prologue » na « Introduction »
5 septembre 2020 7 septembre 2020 adminTeny fampidiranana« Prologue » na « Introduction »
Tonga eo amin‟ny fanazavana ny boky Apokalypsy ary isika satria, efa haintsika tsara izay ny tompon‟ity fanambarana ity, ary dia efa nekentsika tsara fa tena io ilay tompon‟ity fanambarana ity. Ka izany rehetra izany tsyLire la suite…
Fampidirana Efa hitantsika teo ambony, fa Jesosy Kristy dia nanana ny mpianany sy ny anjeliny marobe nanaraka azy teny amin‟izay rehetra nalehany; fa etsy andanin‟izany ihany koa, dia eo ihany koa i satana izay mananaLire la suite…
Io teny izay nirahin‟Andriamanitra taty amintsika io (satria lasa olombelona ilay Teny), dia milaza Izy fa hoe : « amin‟ny maha irak‟Andriamanitra Azy izany », dia tao amin‟Andriamanitra Izy io no nivoaka avy tao: JaonaLire la suite…
Rehefa tonga tany amin‟ny voninahiny ary i Jesosy Kristy, dia ahoana no nahitan‟i Jaona azy? satria tsy nipoitra tamin‟ny olona maro intsony izy, fa ny fisehoana farany nataon‟i Jesosy Kristy izany dia ny fotoana nanomezanyLire la suite…
Jaona 7:38 – 39 «38 Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. 39 Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany; faLire la suite…
Raha novakiantsika ilay soratra masina teo aloha teo dia ilay ao amin‟ny ohabolana 8: 22- 30 dia milaza mazava tsara ilay izy, fa efa mpita-marika teo anilan‟ny Ray i Jesosy Kristy, ary fony mbola tsyLire la suite…
Satria fony mbola tsy hary ny tany sy ny lanitra no efa nohariana izy, dia hoy ny olona sasany hoe: fa angaha izy moa tsy Andriamanitra indray no hoe nohariana? Fa angaha moa zava-boahary indrayLire la suite…